चेन्नईलाई १ रनले हराउँदै मुम्बई च्याम्पियन! | Hamro Khelkud
चेन्नईलाई १ रनले हराउँदै मुम्बई च्याम्पियन!
एजेन्सी – मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को उपाधि जितेको छ । आइतबार अन्तिम बलसम्म पुगेको खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई १ रनले पराजित गर्दै मुम्बईले चौथो आईपीएल उपाधि जितेको हो ।
अन्तिम बलमा २ रन चाहिएको अवस्थामा लासिथ मालिङ्गाले सार्दुल ठाकुरलाई एलबीडब्लु आउट गरेपछि मुम्बई विजयी भयो । १ सय ५० रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नईले २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १ सय ४८ रन बनायो ।
चेन्नईलाई जितको लागि अन्तिम ओभरमा ९ रन चाहिएको थियो । लाथिस मलिङ्गाको पहिलो बलमा वाटशनले १ रन लिए । दोस्रो बलमा पनि जडेजाले १ रन लिए । तेस्रो बलमा वाटशनले २ रन बटुले । वाटशनले चौथो बलमा दुई रन लिने क्रममा रन आउट भएपछि खेल थप रोमान्चक मोडमा पुगेको थियो । पाँचौ बलमा ठाकुरले २ रन लिएपछि अन्तिम बलमा जितको लागि २ रन चाहिएको थियो । अन्तिम बलमा सार्दुल ठाकुर एलबीडब्लू आउट भएपछि मुम्बई १ रनले विजयी हुन सफल भएको हो ।
ओपनर वाटशनले सानदार पाली खेलेपनि जितको लागि पर्याप्त भएन । उनले ५९ बलमा ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ८० रनमा रन आउट भए । वाटशनले १८ औं ओभरमा क्रुनाल पान्ड्यालाई दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा लगातार छक्का प्रहार गर्दै कुल २० रन बटुलेपछि चेन्नईको जित सहज बनेको थियो ।
दशौं ओभरको दास्रो बलमा राहुल चाहरले सुरेश रैनालाई ८ रनमा एलवी डब्लू आउट गरे । लगतै ११ औं ओभरको तेस्रो बलमा आम्बाती रायडूलाई जसप्रित बुमराहले १ रनमा विकेटकीपर डी ककबाट क्याच आउट गराए । १३ ओभरको चौथो ओभरमा महेन्द्र सिंह धोनी २ रनमा आउट भएपछि चेन्नई संकटमा परेको थियो । चेन्नई जुन समय ८२-४ को कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो ।
१६ औं ओभरमा लाथिस मलिङ्गालाई १ छक्का र शेन वाटशनले ३ चौका प्रहार गर्दै २० रन बटुलेपछि चेन्नई पुन खेलमा फर्किएको थियो । ड्वेन ब्राभो १५ रनमा आउट भए । मुम्बईका जसप्रित बुमराहले २, क्रुनाल पान्ड्या, राहुल चाहर र लाथिस मलिङ्गाले समान १ विकेट हात पारे ।
त्यस अघि राजिभ गान्धी इन्टरनेशल क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १ सय ४९ रन बनाएको थियो । मुम्बईका लागि काइरन पोलार्डले २५ बलमा समान ३ चौका र छक्का प्रहार गर्दै ४१ रनमा अविजित रहे । अन्य ब्याट्सम्यानले भने राम्रो प्रर्दशन गर्न सकेनन् ।
मुम्बईले राम्रो सुरुवात गरेको थियो । पाँचौ ओभरको पाँचौ बलमा सार्दुल ठाकुरले क्विन्टन डि ककलाई विकेटकीपर महेन्द्रसिंह धोनीबाट क्याच आउट गराउँदा मुम्बईले ४५ रन जोडी सकेको थियो । डी ककले १७ बलमा ४ छक्का सहित २९ बटुले । लगतै छैटौं ओभरको दोस्रो बलमा कप्तान रोहित शर्मालाई दिपक चाहरले महेन्द्र सिंह धोनीबाट क्याच गराउँदै १५ रनमा पेभिलिएन फर्काएपछि चेन्नई खेलमा फर्किएको थियो । १२ औं ओभरको दोस्रो बलमा इमरान ताहिरले सुर्य कुमार यादवलाई १५ रनमा बोल्ड आउट गरे । १३ ओभरको तेस्रो बलमा ठाकुरले आफै क्याच लिदै कुनाल पान्ड्यालाई ७ रनमा पेभिलिएन फर्काए ।
१५ औं ओभरको चौथो बलमा ताहिरले सुरेश रैनाबाट ईशान किसानलाई २३ रनमा क्याच आउट गराएपछि चेन्नई खेलमा पूर्ण रुपमा हाबी देखिएको थियो । उनले २६ बलमा ३ चौका प्रहार गरे । १९ ओभरको दोस्रो बलमा दिपक चाहरले योर्कर बलमा हार्दिक पान्ड्यालाई १६ रनमा एलबी डब्लू आउट गर्दै पेभिलिएन फर्काएपछि मुम्बई विशाल योगफलको संभावना सकिएको थियो ।
चेन्नईका लागि दिपक चाहरले घातक बलिङ गरे । उनले ४ ओभमा १ मेडन सहित २६ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । त्यस्तै इमरान ताहिर र सार्दुल ठाकुरको नाममा समान २ विकेट रह्यो ।